Akwụkwọ kacha mma nke ọtụtụ ndị edemede. Akwụkwọ akụkọ kacha mma maka ụdị edemede ọ bụla. Akwụkwọ ndị dị mkpa.
Akwụkwọ Mark Manson 3 kacha elu
Na nke enyemaka onwe anyị, anyị na-achọta gurus site na ọzụzụ kachasị mma na akparamaagwa, akparamaagwa, sociology ma ọ bụ ihe ọ bụla. Ma ọ bụ na mgbe e mesịrị anyị na-agbakwunye nnukwu ndị ndụmọdụ site n'ahụmahụ ahụ ma ọ bụ site na nkwụsi ike, mmụọ ime mmụọ ma ọ bụ ụfọdụ nnukwu ihe ịga nke ọma na mpaghara kwekọrọ. Ma ọ bụ…
Akwụkwọ 3 kacha elu nke Chuck Wendig
Ịbụ onye edemede taa nwere ike ịbụ ihe ọzọ. N'ihi na audiovisual ruru ọkwa Dantesque na ntụrụndụ ụwa. Ewezuga na na-enweghị nnukwu akụkọ n'azụ ya, ihe niile ga-adaba dị ka mpempe shuga. Ya mere, mgbe nyiwe ihe nkiri, ụlọ ọrụ egwuregwu vidiyo, 3 na 4D ma ọ bụ ọbụna metaverse chere na ha emeriwo ihe niile ...
3 akwụkwọ Asa Larsson kacha mma
Ihe gbasara imepụta ezigbo ụlọ akwụkwọ bụ na n'ikpeazụ enwere ụmụ akwụkwọ bara uru. N’ebe a na -adịghị agwụ agwụ nke Nordic nke ụdị ojii, Asa Larsson bụ otu n’ime nkwa ndị ahụ nke afọ iri gara aga nke ka guzosiri ike n’etiti ndị na -ere ụdị a nke nwere ụdị aha a sitere na ya. Ọ…
Akwụkwọ 3 kacha mma nke María Oruña dere
Ya na onye edemede bụ María Oruña, e hiwere oghere nke ndị ode akwụkwọ akụkọ ojii dị ugbu a na Spain, oghere nsọpụrụ nke ya na ya na-ekerịta. Dolores Redondo na Eva García Sáez. Ọ bụghị na m na-ekwu na anyị anaghị ahụ ọtụtụ ndị edemede na-eji onyinye ndị yiri ya na-azụlite ụdị a, mana n'enweghị mgbagha ndị a ...
Top 3 Andrei Kurkov Akwụkwọ
Ọ dị mma mgbe niile ịbanye surrealism ghọrọ akwụkwọ akụkọ nwere ụfọdụ cadence. Na surreal enwere ohere maka ihe atụ, ihe atụ na ọbụna ọmarịcha ma ọ bụrụ na ọ na-emetụ ya aka. Ma ọ bụ eziokwu na Kurkov maara nke ọma. Onye edemede Ukraine a na-enyocha ohere niile nke nnukwu nrọ a, ịkpọ ya n'ụzọ ụfọdụ. …
Akwụkwọ 3 kacha mma nke Santiago Gamboa
Ịbanye n'ime ọrụ Santiago Gamboa na-enye mgbe niile ọhụụ mmekọrịta ọha na eze nke usoro mbụ. Isi ihe bụ na Gamboa bụ akụkọ ifo n'ezie, mana ndabere edemede ahụ a na-atụghị anya ya ka ejiri amamihe nye anyị site na agwa, ụzọ isi hụ ọnọdụ ọha mmadụ, nkọwa gbasasịrị n'echiche ahụ...
Akwụkwọ 3 kacha elu nke Nell Leyshon
Ọdịda dị egwu nke Nell Leyshon na-ejupụta n'ụzọ nkịtị gaa n'akwụkwọ akụkọ nke edebere ebe ndụ ahụ ka ekpughere ya na tebụl emere akwụkwọ. Mmekọrịta dị n'etiti ya na nkwubi okwu na-agwụ agwụ; anwụghị anwụ dị mkpa nke na-eme ihe, ụlọ, ụzọ na ụzọ ụfọdụ ime obodo Bekee. Ndụ bụ isi ọkwa ahụ...
Akwụkwọ atọ kacha mma nke Alma Delia Murillo
Ịbụ onye nketa nke Juan Rulfo na-eche na ọ ga-arụ ọrụ. Ọbụlagodi karịa mgbe mmadụ na-agaghị anakọta mmụọ sitere n'aka ndị ọzọ iburu ha biri na mkpụrụ obi ha. N'ihe banyere onye odee Mexico Alma Delia Murillo, okwu a dị ka ntọala akụkọ ndabere, ihe ngọpụ iji soro…
Ọ bụrụ na enwere onye edemede na Spain nwere ọgụ siri ike Javier Sierra Maka ijide ọkọlọtọ ewelitere n'elu ụdị ihe omimi dị ukwuu, nke ahụ bụ Juan Gómez-Jurado. Kemgbe akwụkwọ mbụ ya pụtara laa azụ na 2007, na embers nke Dan Brown's The Da Vinci Code,...
Akwụkwọ kacha mma nke Mark Sullivan
Akụkọ ifo ma ọ bụ na ọ bụghị akụkọ ifo nke nwere ihunanya. Aghọtara ihe ndị a niile site na ntụle akụkọ akụkọ ahụ nke nkata na-adabere na eziokwu site na akụkọ ndụ zuru oke ma ọ bụ site na ọnọdụ dị egwu nke a na-amata nke ọma. Na Mark Sullivan abụghị onye edemede ịhụnanya. Mana ọ bụ ekele maka atụmatụ ndị a maka…
Peeji1 Peeji2 ... Peeji122 Ọzọ →